Akwụkwọ Akshat Choudhary na Martech Zone |
Edemede site na Akshat Choudhary
You maara na ihe karịrị 90,000 hacks na-nwara ọ bụla nkeji na WordPress saịtị ụwa? Ọfọn, ọ bụrụ na ị nwere ebe nrụọrụ weebụ a kwadoro WordPress, ọnụọgụ ahụ kwesịrị ichegbu onwe gị. O nweghi ihe o mere ma ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa pere mpe. Ndị na-agba ọsọ anaghị akpa ókè na-adabere na nha ma ọ bụ mkpa weebụsaịtị. Ha na-achọ naanị ọghọm ọ bụla enwere ike iji ya mee ihe. May nwere ike ịnọ na-eche - gịnị kpatara hackers jiri zube saịtị WordPress na